Who were Bengali, so called Rohingya?: စစ်တွေမြို့မိမြို့ဖတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးသန်းထွန်းနှင့် အမေးအဖြေ
ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် UN, INGO တွေလှုပ်ဆော်မှုနဲ့ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီများပြားလာခြင်းတွေကြောင့် အခုလိုမျိုးအဓိ ကရုဏ်းတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ ရခိုင်တွေဘက်ကလည်း လူမျိုးဝါးမျိုခြင်းခံရမှာကိုမလို
လားတာရယ်၊ နယ်မြေ ပျောက်ဆုံးခြင်းခံရမယ့်အခြေအနေတွေကို သိပ်ပြီးစိုးရိမ်နေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးတွေနဲ့ ပိုမိုပြင်းထန်လာတဲ့အတွက် ပြဿနာတွေဖြစ်လာခဲ့တာလို့သုံးသပ်တယ်။ ဒါကြောင့် အဓိကမီးမွှေးသော တရားခံဟာ UNHCR ဦးစီးတဲ့, INGO တွေကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်သားတိုင်းကသုံးသပ်ပါတယ်။
မေး- တစ်ချို့က မစဉ်းစားမဆင်ခြင်းပဲအကြမ်းဖက်တယ်လို့ပြောလာကြတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးယူဆပါသလား။
ဖြေ- ကုလား- ရခိုင်အဓိကရုဏ်ဟာ ပညာတတ်ခြင်း၊မတတ်ခြင်း၊ ချမ်းသားခြင်း မချမ်းသာခြင်း တွေနဲ့မသက်ဆိုင် ပါဘူး။ ပညာမတတ်လို့ ကုလား- ရခိုင်အဓိကရုဏ်းဖြစ်ရတယ်ဆိုရင် ဝေါထရစ်စင်တာကို ၀င်တိုက်တဲ့ မူဆလင် လေယာဉ်မှူးအားလုံးဟာ ပညာတတ်၊ ဒေါက်တာဘွဲ့ရတွေဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက မိတ္ထိလာမှာဖြစ်တဲ့ ဖြစ် စဉ်မှာဆိုရင်လည်း ပါဝင်တဲ့ နှစ်ဘက်စလုံးကလူတွေဟာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေထက် လူချမ်းသာကြွယ်ဝသူ တွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကုလား-ရခိုင်အဓိကရုဏ်းသည် ပညာတတ်ခြင်း၊ မတတ်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း၊မချမ်းသာ ခြင်းနဲ့ ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျခြင်း ၊ တိုးတက်ခြင်းနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။
ကုလားတွေရဲ့ လူမျိုးဝါးမျိုလိုမှု၊ နယ်မြေသိမ်းပိုက်လိုမှုကို တစ်ဘက် ရခိုင်တွေကခုခံကာကွယ်မှုနဲ့သာဆိုင်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့်ရခိုင်တွေဟာ အကြမ်းဖက်တယ်လို့ပြောမယ့်အစား ရခိုင်တွေကသာ အကြမ်းဖက်
အမြဲလိုလို အတင်းအားဓမ္မပြုကျင့်ခံနေရတာတယ်။ အဲဒါတွေကသာလျင် ပဋိပက္ခ တာရှည်ခြင်းရဲ့ စေ့ဆော်မှုတွေဖြစ်ပါ တယ်။
Rafik Ghani said...
Your Fucker Rakhine dirty buddist is original bengali so Rohingya are not bengali they are original Myanmar. Are study rohingya background...Actually Buddists dirty religion is accepted the world UN and the world leader...All buddists behavior is like animal and cows.thanks
Mg Tun khine said...
Stupid monks and mogh..
ဖြေကြားချက်ကတော့ အမှန်တွေပါပဲ ထောက်ခံပါတယ်၊ ဒါမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကို မမေ့ကြနဲ့၊ မြန်မာ့မြေမှာ မြန်မာတွေကို လာစော်ကားရင်တော့ လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး....မကြေနပ်ရင်လဲ လဲသေလိုက်ကြ